သောသီခို: မန်းငြိမ်းမောင် အင်တာဗျူး - ရန်ကုန် (အသံဖိုင်)
အသံဖိုင် ပို့ ပေးလာသူအား အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း။
သမ္မတကြီးက ကရင် နဲ့ တိုင်းရင်းသား ဒေသ တွေမှာ ပညာရေးအတွက် လုပ်ပေးချင်တယ်၊ ဆိုတာကြီးကို အဟုတ်မှတ်ပြီး ၀မ်းသာအားရ ဖေါက်သည်ချထားတာ တွေ့ရပါတယ်။
တိုင်းရင်းသားတွေ တော်လှန်ရေး လုပ်နေတာ ဗဟိုအစိုးရ လုပ်ပေးဖို့ တောင်းဆိုနေခြင်း မဟုတ်။ လုပ်ပိုင်ခွင့် တောင်းနေတာ ဖြစ်တယ်၊ ဆိုတာ တော်လှန်ရေး ခေါင်းဆောင်များ ဆင်ခြင်နိုင်ကြပါစေ။
ဖဒိုမန်းငြိမ်းမောင်ရေ Media မီဒီယာဆိုတာ နိုင်ငံတခုရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးတဖွဲံ့အစီးတခုနဲ့ အဲဒီနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ကြားကပေါင်းကူးတံတားတခုလေ။အဲဒီလိုပဲ အခုဖဒိုကြီးဟာကရင်လူထုကြီးရဲ့ခေါင်းဆောင်တဦး ကရင်လူထု နှစ်ပေါင်း ၆၀ ကျော်ခါးစီးခံလာရတဲ့တော်လှန်ရေးကာလရဲ့ ဦးစွာပေါ်ထွက်လာတဲ့ အလင်းရောင်တန်းကြီးလေဒါကြောင့် အခု Interview လာလုပ်နေကြတဲ့ သတင်း မီဒီယာတွေဟာ ဖဒိုကြီးတို့ ဘယ်လိုဘယ်ပုံ ကရင်လူထုကြီးရဲ့ ရှေ့အနာဂတ်အတွက်ဘယ်လောက် စွန့်စားအနစ်နာခံကျိုးစားလုပ်နေကြတယ်ဆိုတာကရင်ပြည်သူလူထုတရပ်လုံးကို Message ပေးချင်လို့ Information ပေးချင်လို့ လာပြီး Interview လုပ်နေကြတာလေ အဲဒီမီဒီယာသမားတွေကို ဒီလောက်ကြီးဒေါသတကြီးလေသံနဲ့ မိုက်မိ်ုက်ကမ်းကမ်း စိတ်လိုက်မာန်ပါပြောဆိုနေတာဟာ နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တယောက်ရဲ့လေသံမဟုတ်တော့ဖူးနော် " ကိုအကျိုးစီးပွါးကိုလာတိုက်ခိုက်နေတဲ့သူကို စီးပွါးထိခိုက်မှာမို့ အပြင်းအထန်တိုက်ခိုက်နေတဲ့လေသံတွေဖြစ်နေတယ်နော်။ သီးခံစိတ်မရှိယင်နိုင်ငံရေးသမားမလုပ်သင့်သလို ဒီလောက်စိတ်သေးသိမ်ပြီး ဒေါသကြီးယင် အခုရထားတဲ့ရာထူးနဲ့မထိုက်တန်ဖူးဆိုတာသိရဲ့လား အဲဒီဒေါသစိတ်ကြောင့် မှားပြီး အားလုံးဆုံးရှုံးခြင်းကို ရလိမ့်မယ်။
နောက်ပြီး ထောင်ကလွှတ်ပြီး အခွင့်အရေးပေး လိုသလိုညှိလို့ရမဲံ့သူတွေကို တိုင်းရင်းသားငြိမ်းအဖွဲ့မှာနေရာပေးဖို့ ဦးအောင်မင်းကတဆင့်ကျုံးသွင်းခိုင်းထားတာ ဖဒိုကြီးသာမက SNLD က ဦးခွန်ထွန်းဦးလဲပါတာပဲ ဒါပေမဲ့ ဦးခွန်ထွန်းဦးက ဖဒိုကြီးထက်စာယင်ပိုဦးနှောက်ကြီးလို့ ဦးသိန်းစိန်သွင်းတဲ့ ကျုံးထဲကရအောင်ထွက်သွားပြီလေ။
ဒီမှာဖဒိုကြီး ဦးသိန်းစိန် နဲ့ အောင်မင်း မင်းအောင်လှိုင်တို့အိမ်မှာခြံစောင့်ပြီး ဒေါ်လာသွားစားပါ ကရင်တော်လှန်ရေး ကရင်ငြိမ်းချမ်းရေးကိုဦးဆောင်ဖို့အရေအချင်းနဲပါသေးတယ်။
ကျွန်မကရင်အစစ်ပဲ တယောက်တယောက်ချင်းလဲပြီး ကရင်လူမျိုးအားလုံး စစ်မှန်တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးတကယ်ရယင်ပြော အသေခံပေးမယ် ဒီလိုမှမဟုပ် ကရင်ပြည်နယ်က သယံဇာတတွေရောင်းစား စက်မှုဇုံတွေထောင်ကရင်တွေလယ်ယာစွန့်ထွက်ပြေး တောင်ပေါ်တက်ရမဲ့လမ်းစဉ်ဆိုယင်တော့ ရှင်တို့မလွယ်ဖူးသာမှတ် ကရင်အကြောင်းကရင်ပဲသိတယ် ဒါပဲ
ထားတဲ့အရက်ကိုသောက်ပြီးမူးနေတယ်နဲ့ တူတယ်...ဒီလို အတိုင်းဆိုရင်တော့..ကရင့်တော်လှန်ရေးသက်တမ်းဟာ၁၉၄၉ ခုနှစ်မှာစတင်ခဲ့ပြီး ၂၀၁၂ မှာ ပြီးဆုံးသွုားပါပြီ..
၁၉၄၉- ၂၀၁၂= ၆၃....
အဖြေ ... ကရင့်တော်လှန်ရေးကြာရှည်သောအချိန်=၆၃ နှစ်
မဟုတ်ဘူးကွ အဲဒါဆေးမိတယ်လို့ ခေါ်တာကွ...ကြည့်ပါလား မူထူးစေးဖိုး ရော သုံးကျွန်းပြန်ုငြိမ်းမောင်တို့ ကဆေးမိနေတာကွ.... နောက်ဆုံးတော့ ဘယ်သူမပြုမိမိမှုလို့ ဘဲပြောရမှာ အဲဒီလို ခေါင်းဆောင်တွေကိုမဲပေးခဲ့တဲ့ တို့ ကရင်လူမျိုးတွေရဲ့ အမှားပါဘဲ. ကော်မတီကထုတ်ပယ်ခံရတဲ့ မူတူးစေးဖိုး ရောဂျာခင်တွေကရွေးကောက်ပွဲမှာ ရာထူးကြီးကြီး ပေးမိခဲ့တာကို ဒို့ပြည်သူ တွေရဲ့အမှားကွာ......
ရန်သူလက်ထဲ ကျဘူးတဲ့လူကို ဘယ်တော့မှပြန်မသုံးဘူး လို့ တခြားသတင်းတစ်ပုဒ်မှာ သောသီခိုကွန်မက်ရေးထား ဒါ ဒီအဖိုးကြီးအတွက်ပဲနေမှာပါ။ သူ့ ကိုနေရာပေးတဲ့ ငတုံးတွေလည်းရှိသေးတယ်ဆိုတော့ မင်းတို့ ကောင်တွေအားလုံး ခွေးလုံးလုံးကြီးဖြစ်တော့မယ်။
Sound like he was drunk, riding Mercede car (one of the many cars he got from Aung Min and Thein Sein).... I have never expected such stupid and brainless guys will become NUN top leader. Suchashame history.... Candidates of 15th Congress have to take thier responsibiliies and accountabilities by voting these people.... The bloody guy will beavictim in Karen struggle journy and people will write his true history-- relationship with Aung Min and Thein Sein........